PressReader - Isolezwe: 2018-05-18 - UMkhize ethubeni lebhande kwi CT City
UMkhize ethubeni lebhande kwi CT City
UKULUNGELE ukuhola iCape Town City inqobe izicoco ngesizini ezayo, umdlali wayo wasemuva uThami Mkhize.
UMkhize ubenikezwa ibhande kwiCity uma engekho uRobyn Johannes obengukaputeni. Ubeligqokile emdlalweni wokugcina weligi emasontweni amabili edlule njengoba uJohannes ubedonsa isigwebo samakhadi.
UJohannes useyalishiya iqembu, usezogijima kwiBidvest Wits ngesizini ezayo okusho ukuvuleka kwesikhala sikakaputeni.
Ebuzwa uMkhize oqhamuka KwaZulu-Natal ukuthi ngabe usekulungele ukulithatha ngokugcwele ibhande, uthe: “Ngeke kungikhalise lokho. Umqeqeshi uke wakhuluma nami ngokuthi uma uRobyn engekho yimina engizohola iqembu. Wathi indlela engenza ngayo ejimini iyamjabulisa iyamkhombisa ukuthi ngingakwazi ukuhola abanye enkundleni. Wangitshela ukuthi akabhekile ukuthi ngishintshe indlela engidlala ngayo kodwa ngiyazi ukuthi kukumina ukuthi ngiqhubeke ngisebenze ngokuzimisela.”
Ukuthenjwa ngumqeqeshi, uBenni McCarthy, kumenze wabona ukuthi angakwazi ukuhola iqembu. Lena bekuyisizini yesibili uMkhize edlala kuleli qembu laseKapa emuva kokusungulwa kwalo ngesizini ka-2016/2017.
Kuleyo sizini banqobe isicoco seTelkom Knockout ngaphansi kuka-Eric Tinkler.
Kule sizini ezikaMcCarthy zishaywe yiBidvest Wits kowamanqamu weMTN 8. Kwiligi bagcine beyibambe endaweni yesihlanu okusho ukuthi bazodlala kwiMTN 8 nangesizini ezayo.
UMkhize uyakholwa wukuthi abakwenzile kule sizini kuzobakhulisa.
“Kumele kube khona umehluko ngoba kule sizini indlela esiqale ngayo bekubonakala sengathi kukhona into ezayo kodwa salahlekelwa abanye abadlali. Kuke kwaba khona isikhathi lapho singazange senze khona kahle kodwa sabuye sakwazi ukuvuka. Abanye abadlali bebeqala ukudlala kwiPremiership kodwa ngiyakholwa wukuthi isipiliyoni abasitholile sizosisiza kakhulu ngesizini ezayo.
“Nginethemba lokuthi ngeke siqale phansi silungise amaphutha ebesiwenza kule sizini. Kuzoba khona inqubekela phambili ngoba mina nje angisadlaleli ukuba kwiPSL kodwa ngidlalela ukuthi kube khona engikuwinayo. Ngiphoxekile ukuthi kule sizini asiwinanga lutho kodwa kuyangikhuthaza ukuthi sifike kowamanqamu weMTN 8 ngemuva kokunqoba iTelkom Knockout,” kusho uMkhize.
Ebuzwa uMcCarthy ngamagalelo kaMkhize eqenjini uthe uma sekubuywa ekhefini, akangabanzi ukuthi ungomunye wabadlali okuzobhekwa kubona ukaputeni omusha weCity.